Crosscall Core-T4 ilay takelaka amin'ny faritra rehetra [Review] | Vaovao momba ny gadget
Crosscall Core-T4 ilay takelaka amin'ny faritra rehetra [Analysis]
Miguel Hernandez | 28/03/2021 10:00 | Nohavaozina amin'ny 31/03/2021 12:45 | General, hevitra
Miverina ao amin'ny Actualidad Gadget izahay miaraka amin'ny atiny tianao, miaraka amin'ny fandalinana tsara indrindra mba hahafahanao manapa-kevitra raha toa ka mendrika ny hividy vokatra sasany, ary amin'ity indray mitoraka ity dia mifantoka amin'ny tsena tena mampiavaka azy izahay. mahatohitra tena ho an'ny karazana faritra rehetra, aza hadino izany.
Ilay vaovao dia tafiditra eo amin'ny latabatra fandinihanay Crosscall Core-T4, takelaka tena sarotra, feno kojakoja ary ambonin'izany rehetra mahatohitra indrindra. Jereo miaraka aminay ireo toetra mampiavaka azy indrindra ary raha mendrika ny mividy an'ity karazana vokatra ity izay mifantoka amin'ny fanoherana sy ny faharetana, inona ny hevitrao?
Toy ny tamin'ny tranga hafa, nanapa-kevitra izahay fa hiaraka amin'ity famakafakana vaovao ity miaraka amin'ny horonan-tsary iray izay ho azonao atao ny mankafy amin'ny fantsona YouTube anay ary mitarika an'ity fandalinana ity. Ao no ahitanao ny unboxing ny takelaka Croscall Core-T4, ary koa andiam-pitsapana manokana izay tanterahinay mba hahafahanareo mahazo hevitra momba ny fahombiazany amin'ny ankapobeny, satria mora kokoa ny mahita azy amin'ny masonao noho ny lazaina momba azy. Aza adino ny misoratra anarana ary mamela anay Tiana hanampy antsika hitombo hatrany.
1 Volavola eritreretina hanoherana
3 Fizarana multimedia sy fakan-tsary
4 Tombony azo avy amin'ny fitaovana Crosscall sy ny fahaleovan-tena
Volavola eritreretina hanoherana
Raha ny famolavolana, Croscall dia manana tsipika matanjaka izay mahatonga antsika hamantatra haingana hoe inona ny vokariny, amin'ity tranga ity dia tsy ho latsa-danja ny Core-T4, ary izy io dia manana tsipika azo fantarina, indrindra raha ampitahaintsika amin'ny vokatra hafa amin'ny fakantsary. Manana famolavolana mifangaro izahay izay misy fitaovana metaly ary koa plastika henjana sy malefaka manome antsika fiarovana fanampiny. Amin'izany no ahazoany IP68 fanamarinana miaraka amin'ny tandrifin'ny rano manohitra ny fanitrihana hatramin'ny 2m mandritra ny telopolo minitra, ary koa ny famehezana tanteraka amin'ny vovoka.
lanja: Gramin'ny 610
Dimensions: 225 X 135 X 14mm
Vidio ny Crosscall Core-T4 vaovao amin'ny vidiny tsara indrindra
Eo aloha dia ananantsika Gorila fitaratra 3, izay manome antsika fanoherana ekena amin'ny fahatapahana. Amin'ny maha-tombony antsika dia manana rindrambaiko malaza sy vera fisaka tanteraka isika. Fiantohana ny fitsapana azy fanoherana ny haavon'ny 1,5 metatra amin'ny gorodona vita amin'ny beton sy ny teôria amin'ny lafiny rehetra. Toy izany koa, ny mari-pana tafahoatra eo anelanelan'ny -25º sy ny + 50º dia tsy hisy fiatraikany amin'ny fahombiazany amin'ny ankapobeny. Ankoatr'izay dia mahatohitra orana izy ary na ny rano masira aza, mahatonga azy io ho tonga lafatra, ohatra, hampiasaina ho GPS amin'ny sambo. Ety ivelany, toa tsy misy tsy fananany, fa… inona no itoerany ao anatiny? Andao jerena.
Ny iray amin'ireo zavatra hahagaga antsika indrindra dia ny ny lanjany lehibe Raha dinihina ny fahamafisan'ilay fitaovana, fa raha dinihina fa mifantoka amin'ny fiaretana izany dia tsy mahagaga antsika ihany koa.
Raha ny momba ny processeur dia hitantsika eto indray angamba ny iray amin'ireo teboka ratsy indrindra miaraka amin'ny RAM, ary izany dia ny filokana Crosscall amin'ny fahan'ny fidirana miaraka amin'ny Qualcomm Snapdragon 450, farafaharatsiny, eny, tsy mbola niloka tamin'ny MediaTek izy ireo. Ny fahatsiarovana ram izay hiaraka amin'ity mpanamory ity dia 3GB, na dia tsy manana data marina momba ny karazana fahatsiarovana nampiasaina aza izahay.
Amin'ny haavon'ny fifandraisana dia manana seranana izahay DualSIM hahafahantsika mampiasa ny Crosscall T4 ho fitaovana tokana. Amin'izay isika manana fifandraisana 4G LTE miaraka amin'ny fandrakofana ampy araka ny fanadihadiana nataonay. Manana faritra iray hafa izay mamela antsika mangatsiaka tokoa isika, ary manana izany WiFi ac mahazatra sy Bluetooth 4.1.
32GB fitehirizana azo alain'ny microSD hatramin'ny 512GB
A-GPS, Glonass, Beidou ary Galileo
Ho tombony ananantsika NFC Ka afaka mampiasa fomba fandoavam-bola tsy mifandray aza izahay, ary koa seranana USB-C, izay tsy afaka naka horonantsary tamin'ny fitsapana nataonay. Amin'ny lafiny iray, manana headphones tafiditra ao anaty fonosana sy seranana izahay Jack 3,5mm.
Fizarana multimedia sy fakan-tsary
Manana tontonana izahay LCD IPS 8 mirefy misy vahaolana WXGA, kely ambonin'ny HD ary tsy misy Full HD, zavatra iray izay manadanja ny haben'ny efijery dia sarotra takarina. Mazava ho azy, ny tontonana dia manome hazavana avo lenta ary loko somary voahitsy ihany, na izany aza, ny vahaolana eo ambanin'ny FHD amin'ny fitaovana iray amin'ity vidiny ity dia lasa mifanohitra. Ny feo ho an'ny anjarany dia tsara raha jerena ny mpandahateny tokana ao ambany. Vidio amin'ny vidiny mirary indrindra eto Amazon raha efa naharesy lahatra anao izy.
Mikasika ireo fakantsary manana 5MP eo aloha isika, mihoatra ny ampy hihazonana antso an-tsary amin'ny tontolo somary normal, ary amin'ny fakan-tsary any aoriana manana 13MP izahay hampiasaina matetika, ny fahombiazana dia ambany amin'ny toe-java-dratsy ary manana fampiharana fakan-tsary tsotra izy ity, mamela anao santionany izahay:
Jereo ny antsipiriany momba ny fomba fivezivezeny amin'ny horonan-tsary> Rohy mankany amin'ny Internet
Izany dia nilaza fa ny traikefa haino aman-jery dia azo lazaina ho ampy, saingy mazava rahona noho ny tsy fananany feo stereo sy ny faran'ny fanapahan-keviny, na dia eo aza ny famirapiratany sy ny famirapiratany afaka ankafizina any ivelany tsy misy olana izany.
Tombony azo avy amin'ny fitaovana Crosscall sy ny fahaleovan-tena
Amin'ity tranga ity, ny fonosana dia misy ny adaptatera aoriana X-Blocker mifanaraka amin'ny Fifaneraserana andramena X-Link an'ny tompony Crosscall. Manana hatramin'ny batterie an'ny 7.000 mAh nefa tsy nisy famandrihana haingana, manolotra fahaleovan-tena mihoatra ny ampy ho an'ny fampiasana ara-dalàna ary hankafizanao ny atiny multimedia tsy misy olana be loatra.
Asongadinay amin'ity vokatra ity fa toy ny amin'ny Crosscalls rehetra ny fahaizany "off-road" mampino, Tsy hahita fitaovana maharitra sy miovaova kokoa ianao miaraka amin'ireo antoka omen'ny Croscall. Na izany aza, toy ny mahazatra amin'ity karazana vokatra ity dia nohamafisintsika loatra ny fikirakirana ny vidiny, tsy ampy farafahakeliny ny vahaolana FHD eo amin'ny efijery, fitahirizana lehibe kokoa noho ny 32GB eo ho eo izay toa kely dia kely ary ny fahatsiarovany RAM 3GB fohy.
Ao koa ny X-Strap: tazomy ho eo akaikinao foana ny takelakao. Ny fehin-tsoroka, izay natao hanamboarana ny takelaka CORE-T4, dia miaraka amina famaranana mihodina 360 ° natao hifanaraka amin'ny fampiasana rehetra rehefa mandeha ny fotoana ka hametra ny loza mety haratra. Ho fanampin'izany, noho ny tady tsy misy slip sy padded, azonao atao tsara ny mitondra ny kitapo soroka X-STRAP mandritra ny tontolo andro.
Azonao atao ny mividy ny Crosscall Core-T4 vaovao avy amin'ny 519,90 euro amin'ny tranokala ofisialiny, na araraoty ny fihenam-bidy atolotra amin'ny Amazon izay ahitanao azy raha tsy 471 fotsiny Ity rohy ity. Manantena izahay fa tianay ny famakafakana nataonay ary nametraka fanontaniana taminay tao anaty boaty hevitra izahay, izay hahafaly anay mamaly anao.
Navoaka tamin'ny: Diaben'ny 28 tamin'ny 2021
Fanovana farany: Diaben'ny 31 tamin'ny 2021
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Crosscall Core-T4 ilay takelaka amin'ny faritra rehetra [Analysis]
Ny lalao môtô tsara indrindra ho an'ny PC